Vaovao - Miarahaba ny University of Technology Zhejiang sy ny birao siantifika ary teknolojia ao an-tanàna noho ny fifanakalozanay
Miarahaba ny Biraon'ny Oniversite Zhejiang ao amin'ny Teknolojia sy ny Siansa ary ny Teknolojia ao an-tanàna noho ny fifanakalozanay
2020. Ny tolakandron'ny 20 Aogositra, tonga tao amin'ny orinasanay (Ruiqi (Hangzhou) sivana Technology Co., Ltd. ny Zhejiang University of Technology Textile Research Institute sy ny Hangzhou Science and Technology Bureau.
Taorian'ny nilalaovan'ny horonantsary fampiroboroboana anay, ny filoha Zeng Jiangmei dia nanolotra ny vokatra lehibe. Ruiqi (Hangzhou) sivana Technology Co., Ltd. dia orinasa manokan-tena amin'ny fanaovana lamba tsy tenona sy fitaovana fiarovana ny tontolo iainana. Indrindra tato anatin'ny taona vitsivitsy, ny fivoaran'ny fibre manokana dia tsapa ho eny an-tsena taorian'ny fiderana ny tsena.
Miorina amin'ny fifanakalozana lalina ny haitao lamba eo amin'ny ankolafy telo dia nilaza ny University of Technology fa ny fanodinana aorian'izay tsy tenona dia zavatra efa fanaon'izy ireo foana. Noho io antony io dia manantena izy ireo fa hahita orinasa matanjaka hiaraha-miasa, tsy vitan'ny hoe tokony hatao tsara ny serivisy, dia tokony ho lasibatra sy kendrena ny serivisy.
Mandritra izany fotoana izany dia mila fahitana matanjaka sy fanohanana ara-teknika koa izahay, ary manana valiny tsara ho an'ny Dr. Su avy amin'ny University of Technology ho an'ny torohevitra momba ny olana ara-teknika sendra ny orinasa. Taty aoriana, nilaza ny filoha Zeng fa manantena izahay fa hahatratra ny vidiny ambany indrindra sy ny kalitao avo indrindra amin'ny indostria.
Taorian'izay, teo ambany fitarihan'ny filoha Zeng, dia nitsidika ny atrikasa famokarana tamim-pahalianana fatratra ny rehetra. Ny filoha Zeng dia nampahafantatra anao ny zava-misy ankehitriny amin'ny famokarana sy ny fanavaozana ny fitaovana. Ny mpitarika ny Institute of Technology dia nanontany tamin'ny antsipiriany momba ny fampiasana sy ny fampiasana ny fitaovantsika. Deraina ny teknolojia sy ny fitantanana anay.
Avy eo, tonga tao amin'ny tranomboky fampirantiana vokatra vita izahay, izay ahitanay ny ankamaroan'ny vokatra vita amin'ny lamba. Ny filoha Zeng dia nanasongadina ny tsapan'i Kevlar, ny fahatsapana PPS, ny fahatsapana acrylic, ny fahatsapana ny basalt ary ny fahatsapana ny jute. Voalaza fa ny orinasanay no orinasa voalohany mahatsapa basalt any Sina. Ny fanondranana ny tsapatsapa dia ampiasaina indrindra hisorohana ny fitomboan'ny ahidratsy ary ho mora simba ny tontolo iainana ary ho simba.
Farany, tonga tao amin'ny laboratoara anay ny ankolafy telo, rehefa niditra izahay dia nahasarika an'ireo masinina ireo. Manokana, ny masinina fanandramana manohitra ny doha, ity milina ity dia mety ho lamba fanoherana ny doka amin'ny fenitra eropeana, ny fenitra amerikanina ary ny fitsapana fanoherana ny prick, ny University of Technology Dr. Zhao dia nanontany manokana momba ilay masinina, toy ny test fomba, andrana izay aseho ny axis marindrano sy mitsangana, sns.
Ny orinasanay sy ny oniversite ny teknolojia Zhejiang dia nitazona fifandraisana akaiky sy mpinamana efa ela, ity fitsidihana sy fifanakalozana ity dia hampitombo ny fiaraha-miasa ara-teknika eo amin'ny roa tonta.